Lahatsoratra nataon'i Ronen Shnidman momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Ronen Shnidman
Ronen dia evanjelistra iray vokatra ao pipl, orinasa natokana hanamorana ny fampiasana vaovao ara-tsosialy sy matihanina momba ny olona. Azonao atao ny manaraka azy sy ny vaovao farany ary ny fanavaozana avy amin'ny Pipl ao amin'ny Twitter.
Ny marketing amin'ny mailaka dia fitaovana iray malaza hanatonan'ireo mpivarotra olona mety ho mpanjifa hatramin'ny nananganana an'ity medium ity tamin'ny taona 1990. Na dia eo aza ny famoronana teknika vaovao kokoa toy ny media sosialy, ny influencer ary ny marketing amin'ny atiny, ny mailaka dia heverina ho mahomby indrindra araka ny fanadihadiana nataon'ny mpivarotra 1,800 notarihin'ny Smart Insights sy GetResponse. Na izany aza, tsy midika izany fa ny fanao tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka dia tsy nivoatra tamin'ny teknolojia vaovao. Misaotra ny media sosialy misy izao